Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-trano » Minisitry ny fizahan-tany any Seychelles miantso ireo DMC
Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Ny minisitry ny raharaham-bahiny sy ny fizahantany ary ny sekretera lehibe an'ny fizahan-tany any Seychelles dia nihaona tamin'ny orinasa mpitantana toeran-kaleha.
Nanohy ny iraka nampahalala azy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany fizahan-tany sy ny vokatr'izy ireo, ny minisitry ny raharaham-bahiny sy ny fizahantany ary ny sekretera lehiben'ny fizahan-tany, ny masoivoho Sylvestre Radegonde, dia nihaona tamin'ny orinasam-pitantanana toerana maro ny alakamisy 12 aogositra 2021.
Nandritra ny fivoriany dia niantso ny fanamorana ny vokatra sy ny serivisy ny minisitra.
Notsipihany ihany koa ny filàna ny fampidirana ny kolontsaina sy ny lova kreôla any Seychellois amin'ny tolotra fizahan-tany ao amin'ny firenena.
Ny sekretera lehiben'ny fizahantany, Ramatoa Sherin Francis, dia niaraka tamin'ny Minisitra Radegonde tamin'ny fitsidihana fivoriana.
Ny minisitra Radegonde dia nanararaotra io fotoana io mba hiantsoana fanamorana ny vokatra sy serivisy, izay manasongadina ihany koa ny filàna fanatsarana ny traikefan'ny mpitsidika amin'ny alàlan'ny fampidirana ny kolontsaina sy ny lova ara-pinoana Seychellois amin'ny tolotra fizahan-tany ataonay.
Ny fitsidihana ny alakamisy dia natomboka tao Pure Escape, DMC manankarena izay ny tsena lehibe indrindra dia i Russia ary misy birao any UK, Maldives, Seychelles ary Emirà Arabo Mitambatra izay manolotra fonosana ho an'ny mpanjifany ao anatin'izany ny mpivaro-tena sy ny mpitari-dalana.
Ny orinasa hafa dia misy ny Silver Pearl Tours sy Travel izay manolotra hetsika isan-karazany ao anatin'izany ny fitsangatsanganana sy ny famindrana tsy miankina, ary ny Cheung Kong Travel, mikendry ny tsena sinoa indrindra, manolotra torolàlana manokana momba ny fiteny ho an'ireo mpandeha vondrona sy isam-batan'olona ao anaty fonosany.
Ny Minisitra Radegonde dia nihaona tamin'ny DMC maro an'ny Seychellois ihany koa anisan'izany ny Summer Rain Tours, izay manolotra fonosana sy serivisy amin'ny satan'ny sambo ho an'ny mpanjifa Saudi Arabia, Rosiana ary Eoropeana, ary Ocean Blue Travel, orinasam-pianakaviana iray, izay mifandray amin'ny mpanjifa ao amin'ny UAE, Alemana amin'ny alàlan'ny tranonkalany.
DMCs an'ny Seychellois hafa notsidihina dia nahitana ny Travel Travel manolotra fonosana fitsangatsanganana ho an'ny orinasa, olona ary vondrona maromaro eo amin'ny tsena Eoropeana sy Afovoany Atsinanana, ary Luxury Travel izay manome fonosana lafo vidy amin'ny tsena rosiana sy afovoany atsinanana.
“Ampahany lehibe amin'ny adidiko amin'ny minisitra ny fahalalana ireo mpiara-miombon'antoka sy mahatakatra ny asany. Ireo fitsidihana ireo dia ahafahantsika mampiseho ihany koa ny fankasitrahanay ary indrindra ny famporisihanay azy ireo hiezaka hanome serivisy sy vokatra tsara kokoa ho an'ireo vahininay, "hoy ny minisitra Radegonde.
Ankoatry ny fahafantarany ny tenany amin'ireo DMC, ny minisitra Radegonde dia nanasongadina ny filàn'ny indostria ny fanasamihafa ny vokatra sy ny fampiroboroboana ny fizahan-tany ara-kolontsaina. "Ny fampiroboroboana ny kolontsaina kreôla dia tsy vitan'ny hoe hanatsara ny traikefan'ireo mpandeha ihany fa hanome fanazavana bebe kokoa ny kolontsaintsika sy ny vondrom-piarahamonin'ny mpanao asa tanana eo an-toerana ary koa hanomezana sehatra ho an'ny mpanakanto eo an-toerana anay," hoy ny Minisitra nanamafy.
Ny sekretera lehiben'ny fizahan-tany, Ramatoa Sherin Francis, izay niaraka tamin'ny minisitra Radegonde tamin'ity dia ity dia nilaza fa ny ny fitsidihana matetika dia fotoana iray hifandraisana miaraka amin'ireo mpiara-miasa ary mahatakatra ny fanamby napetrany, izay manampy ny Sampan-draharahan'ny fizahan-tany hifantoka amin'ny fanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa ny toerana halehany amin'ny ambaratonga rehetra.
Ny fitsidihana ihany koa dia manazava ny olana isan-karazany sy ny fandrosoana eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny tsena loharanom-pahalalana isan-karazany ao amin'ny firenena.